Activities Plan » Computer University (Myikyina)
Home » Activities Plan
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မြစ်ကြီးနား) တွင် သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိသော ကွန်ပျူတာဘာသာရပ် များမှာ ပရိုဂရမ်နည်းပညာ(Software) ဘာသာရပ်များ၊ စက်နည်းပညာ(Hardware) ဘာသာရပ်များ၊ အသုံးချနည်းပညာ (Application) ဘာသာရပ်များ၊ သုတသိပ္ပံ (Information Science) ဘာသာရပ်များနှင့် တွက်ချက်ရေးသင်္ချာ (Computational Mathematics) ဘာသာရပ် များဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အောင်ချက်မြှင့်မားရေးနှင့် အရည်အချင်းပြည့်မှီသော ဘွဲ့ရများ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား စာသင်ခန်းနှင့် လက်တွေ့ခန်းအတွင်း၌ ဂရုတစိုက်သင်ကြားပေးခြင်း၊ သင်ကြား ပြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုချက်ခြင်း ပြန်လည်မေးမြန်း ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်စေခြင်း၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏အရည်အသွေး သိရှိစေရန် Tutorial များစစ်ဆေးခြင်း၊ ဘာသာရပ်အလိုက်လိုအပ်သော Project များပြုလုပ်စေခြင်း၊ နားမလည်သော သင်ခန်းစာများအား အချိန်မရွေး လွတ်လပ်စွာတိုင်ပင် ဆွေးနွေးမေးမြန်းစေခြင်း တို့ကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Activities များကိုပြုလုပ်မည်ဖြစ် ပါသည်။
၁။ စီနီယာကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများမှ မောင်မယ်သစ်လွင် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများကို ကြိုဆိုပွဲပြုလုပ်ပေးခြင်း။
၂။ အမျိုးသားစိတ်ဓါတ်ရှင်သန် ထက်မြက်ရေးအတွက် လွတ်လပ်ရေးနေ့၊ ပြည်ထောင်စုနေ့ စသည့် နေ့များတွင် အထိမ်းအမှတ် စာစီစာကုံးနှင့် ကဗျာပြိုင်ပွဲများ၊ အင်္ဂလိပ်စာကျပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲနှင့် Essay ပြိုင်ပွဲများ အားကစားပြိုင်ပွဲများကျင်းပခြင်း။
၃။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိစေရန် ထမင်းနဲထိုးပွဲကျင်းပခြင်း။
၄။ မိုးရာသီအမျိုးသားဖူဆယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအား မြို့နယ်အားကစားကွင်းတွင်ကျင်းပခြင်း။
၅။ ဝါတွင်းကာလတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းများ ကပ်လှူပူဇော်ပွဲကျင်းပခြင်း။
၆။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများမှ ဆရာ၊ ဆရာမများအား အာစရိယပူဇော်ပွဲကျင်းပခြင်း။
၇။ ဒီဇင်ဘာလ တွင်ခရစ်စမတ်ဆုတောင်းပွဲများ ကျင်ပခြင်း။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မြစ်ကြီးနား) အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအသင်းအဖွဲ့များအား ဖွဲ့စည်းထား ရှိပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ပရဟိတလူငယ်များအသင်း (၂၀၁၅ခုနှစ်စတင်ဖွဲ့စည်း)၊
အားကစားအမျိုးအစားနှင့် ပွဲစဉ်များ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မြစ်ကြီးနား) အနေဖြင့် အားကစားအသင်းများ ဖွဲ့စည်း၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။ ကျောင်းသားများအား အမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲများ၊ ပိုက်ကျော်ခြင်းပြိုင်ပွဲများ၊ မိုးရာသီ အမျိုးသားဖူဆယ်ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးပါသည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မြစ်ကြီးနား) ရှိ ကျောင်းစာကြည်တိုက်တွင် ပြဌာန်းစာအုပ်များ၊ သုတ၊ ရသဆိုင်ရာစာအုပ်များ၊ သုတေသနနှင့်ဆိုင်သော စာတမ်းများကိုထားရှိပါသည်။ ကျောင်းစာကြည်တိုက်နှင့် တွဲဖက်၍ OnLine / Offline Library System များပါ ထူထောင်ထားပါသည်။ ဝန်ထမ်းများနှင့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ အင်တာနက် တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် Campus Wifi စနစ်ပါ တပ်ဆင်ထားပါသည်။
The Computer subjects: Software, Hardware, Application, Information Science and Computational Mathematics are taught at Computer University (Myitkyina). The plans such as teaching students carefully in the classrooms and lab rooms, making discussion immediately after teaching, testing tutorial for their understanding and asking questions and discussing the lessons they don’t understand openly are implemented in order to promote students’ exam pass rate and produce qualified graduates.
Activities Plan (2)
The following activities are done in academic year.
1. Being given fresher welcome ceremony for newcomers by senior students.
2. Holding English essay and debate competitions and Myanmar essay and poem ones as the remembrance of the Independence Day in order to flourish the sense of union spirit.
3 Holding Hta-ma –ne contests in order to get unity.
4. Holding Fusel football match at the township playground in the rainy season.
5. Offering robe to monks in the period of Waso.
6. Being held the ceremony of paying homage to teachers by the students.
Associations and Society
The following associations and society are organized in the Computer University (Myitkyina).
Young Man Buddhist Philanthropic Association (started to organize in 2015)
Young Man Buddhist Worship Association (started to organize in 2015)
Sport groups are also organized in the Computer University (Myitkyina). The matches of football, cane-ball (Sepak Takraw), Fusel football and chess will be held for students.
There arealot of tent books, thesis research papers and books for knowledge and pleasure in the library. Online and offline library system are also deployed at library. Online and offline library system are also deployed at library. Not only students and teachers, but also staffs can access Internet by using Campus Wifi.
ပံု(၁) ကြန္ပ်ဴတာခန္းတြင္ သင္ၾကားေနပံု
ပုံ(၂)Hardware Lab တွင် သင်ကြားနေပုံ
ပုံ(၃) English4skills သင်ကြားနေပုံ
Copyright © 2016 Computer University(Myitkyina). All Rights Reserved.